HORDHAC: Newcastle United vs Manchester City – Gool FM
(England) 29 Jan 2019. Manchester City ayaa marti u ah Newcastle United xilli ay eeganayaan guushoodii shanaad oo xiriir ah Premier League iyo sidii ay u soo jari lahaayeen fariqiga dhibcaha ee Liverpool.
Manchester City waxaa markale ka maqnaan doona daafacooda Vincent Kompany, kaa oo aan ciyaarin tan iyo guushii 2-1 ay ka gaareen Liverpool 3-dii Janaayo.
City waxaa sidoo kale shaki laga muujinayaa Benjamin Mendy, kaa oo la dhibtoonayay fal celin yar kulankii uu dhaawac uga soo laabtay ee Burton usbuucii tagay, lagumana soo darin kulankii FA Cup ay ka adkaadeen Burnley.
Weeraryahanka Newcastle Joselu ayaa ku maqnaan doona dhaawac Canqowga ah ee ka soo gaaray ciyaartii FA Cup ay sabtidii guul darada kala soo kulmeen Watford.
Yeelkeede, Salomon Rondon ayay had iyo jeer u badan tahay inuu hogaamin doono weerarka kaddib markii la nasiyay isaga iyo lix kale kulankii dhawaa.
Joselu ayaa liiska dhaawacyada kula biiraya Paul Dummett, Jonjo Shelvey, Mohamed Diame iyo Ki Sung-Yueng, halka Weeraryahanka Yoshinori Muto uu ku maqan yahay waajibaadka xulkiisa Japan oo ka qeyb galaya Asian Cup.
Kulanka: Newcastle United vs Manchester City (Premier League)
Goobta: St James’ Park
Garsoorka: Paul Tierney (England)
Newcastle wax guul ah ma gaarin 22-dii kulan ee ugu dambeeyay Premier League ay la ciyaarto Man City (19-guul darro iyo 3-bar baro), Waa waqtigii ugu dheeraa ay wax guul ah gaari wayso Newcastle United iyo sidoo kale waqtigii ugu dheeraa ee dhinaceeda dhulka la dhigi waayo Man City horyaalka.
Man City ayaa 46-dhibcood ka heshay 48-dii dhibcood ee ugu dambeysay ay ka heli kartay kulan ay ku wajaheyso Newcastle (15-guul, 1- bar baro, 0-guul darro), waxayna mudadaas uga dhalisay 45-gool halka laga dhaliyay 9-gool oo qura.
Man City ayaa dhalisay goolka furitaanka ciyaarta 20-jeer Premier League kal ciyaareedkan (18-guul, 2-guul darro, 0-bar baro), halka Newcastle laga adkaaday dhammaan 11-kii kulan ee goolasha lagu bilaabay, waana rikoodhka guul darrada ee ugu sarreeya 100% kal ciyaareedkan.
Kulanka wuxuu noqon doonaa kulankii 100-aad uu Pepe Guardiola ciyaaro Premier League, wuxuu soo adkaaday 73- ka mid ah 99-kii kulan uu soo leyliyay Man City (15-bar baro iyo 11-guul darro), Rikoodhka guulaha ugu badan uu Tababare gaaro 100-kiisii kulan ee ugu horrreeyay horyaalka waa 73-kulan waxaana dhigay Jose Mourinho.
Weeraryahanka Man City Sergio Aguero ayaa dhaliyay 14-gool 12-kii kulan uu Premier League uga hor yimid Newcastle, waana laacibka ugu badan ee hal koox intaa ka dhaliya taariikhda Premier League.
Xiddiga Man City Raheem Sterling ayaa iminka ku lug leh 99-gool waayihiisa Premier League (59-gool iyo 40-cawin, 212 kulan)
Safafka ay ku soo gali karaan Newcastle United vs Manchester City: